कोलोराडो (CO) लोट्टो शनि, जुलाई २ N नम्बर (परिणाम) | लटरी.कट
परिणाम > कोलोराडो > लोट्टो > 07-18-2020
शनिबार, जुलाई 18, 2020 कोलोराडो लोट्टो विजयी नम्बरहरू र परिणामहरू
तपाईं भेट्न सक्नुहुन्छ शनिबार, जुलाई ११, २०२० कोलोराडो लोट्टो को लागी विजयी नम्बरहरू यस पृष्ठमा एक पटक चित्र कोर्ने क्रममा। पछिल्लो लटरी जानकारीको साथ अद्यावधिक रहनको लागि, हाम्रो मोबाइल अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्।
सबै पछिल्ला २०२० सीओ लोटो परिणामहरू हेर्नुहोस्
कोलोराडो लॉटरी खेलहरू
Powerball :7: .० MT १-5 from बाट र १-२1 बाट १ जैकपोट :9: .० MT बुधबार र शनिवार
मेगा लाखौं :7: .० MT १-5 from बाट र १-२1 बाट १ जैकपोट :9: .० MT मंगलबार र शुक्रवार
जीवनको लागि भाग्यशाली :7: .० MT १-5 from बाट र १-२1 बाट १ शीर्ष पुरस्कार :8: .० MT सोमबार र बिहिबार
कोलोराडो लोट्टो ++ :7: .० MT १--6 देखि जैकपोट :7: .० MT बुधबार र शनिवार
नगद5:7: .० MT १--5 देखि शीर्ष पुरस्कार :7: .० MT दैनिक
3 Midday छान्नुहोस् :1: .० MT १--3 देखि शीर्ष पुरस्कार :1: .० MT दैनिक
3 साँझ छान्नुहोस् :7: .० MT १--3 देखि शीर्ष पुरस्कार :7: .० MT दैनिक
कोलोराडो लॉटरी FAQ हरू
के म अज्ञात रहन सक्छु यदि मैले कोलोराडोमा लटरी जितें?
कोलोराडोमा विजेताहरूको नामहरू कोलोराडो ओपन रेकर्ड ऐन अन्तर्गत पर्दछन् जसको अर्थ हो कि विजेताहरूको पहिलो नाम र अन्तिम आरम्भ सीओ लॉटरी वेबसाइटमा प्रकाशित हुन्छन्। यद्यपि, विजेताहरू आफ्नो फोटो लिन नखोज्न सक्दछन्।
आज CO लॉटरी कति छ?
तपाईको नयाँ मनपराउने खेलहरूको लागि यहाँ भर्खरको सीओ लटरी ज्याकपॉट रकमहरू लोटरी.कटमा पाउन सक्नुहुन्छ कोलोराडो लॉटरी Jackpots पृष्ठ।
यदि मैले CO लॉटरी जितें भने म कति करहरूमा भुक्तानी गर्नेछु?
राज्यका बासिन्दाहरूको लागि $ 5,000 भन्दा बढी पुरस्कार 4% राज्य कर र 24% संघीय कर रोक्ने विषयको अधीनमा छन्।
CO लॉटरी जित प्राप्त गर्न कति समय लाग्छ?
$ 599 to Pri सम्मका पुरस्कारहरू एक अधिकृत रिटेलरमा तुरून्त दावी गर्न सकिन्छ। ठूला पुरस्कारहरू लॉटरी हेडक्वार्टरमा दाबी गरिएको हुनुपर्दछ वा मेलमा पठाइन्छ र प्रक्रियामा अझ बढी लिन्छ।
के म CO लॉटरी टिकट अनलाइन किन्न सक्छु?
कोलोराडो लॉटरीको बारेमा
कोलोराडो लॉटरी जनवरी २ 24, १ 1983 .35 मा सुरू भयो, र शुरूमा मात्र स्क्र्राचर टिकटहरू बिक्री भयो। कोलोराडो लोट्टोबाट हुने नाफा प्राकृतिक र वन्यजन्तु संरक्षणको लागि विभिन्न कोष र कार्यक्रमहरूको साथसाथै “सर्वश्रेष्ठ” - उत्कृष्ट विद्यालय आज निर्माण गर्नेतर्फ जान्छ। यसको स्थापना भएको 3.4 XNUMX भन्दा बढी वर्षहरूमा, सीओ लटरीले कोलोराडोको ट्रेल्स, पार्क र खुला भूमि संरक्षण र संरक्षण गर्न $ $ XNUMX अर्ब डलर फिर्ता गरेको छ।
कोलोराडो लोटरीको बारेमा अधिक जान्नुहोस् आधिकारिक कोलोराडो लोटरीको भ्रमण गरेर वेबसाइट.